Isibambo se-Brass, i-Brass Knob, i-Pull Handle - Zhangshiwujin
Ikhabethe / Ifenisha / Door Knob
Ikhabethe leKhabhinethi / Ifenisha
Kubanjiwe kabusha Ukuphathwa
Ukuhlanganiswa Kwe-Knurled T Bar Bedroom Cupboard Handle P ...
Sibutsetelo Imininingwane Yesimo Esisheshayo: Ukuphathwa kwefenisha kanye nefindo, ifenisha yokubamba kanye nefindo, isibambo semibhalo ekhanyayo esikhanyayo: Y Indawo Yomsuka: Zhejiang, China Igama Lamagama: Inombolo Yemodeli ye-KOPPALIVE: I-Brass Ukusetshenziswa: ...
I-KOPPALIVE Iphromoshini Yesimanjemanje Design I-Bedroo ...
Sibutsetelo Imininingwane Yesimo Esisheshayo: Ukuphathwa kwefenisha kanye nefindo, ifenisha yokubamba kanye nefindo, isibambo semibhalo ekhanyayo esikhanyayo: Y Indawo Yomsuka: Zhejiang, China Igama Lamagama: Inombolo YeModeli ye-KOPPALIVE: 6091 Material: Brass Ukusetshenziswa:
Koppalive ifenisha hardware esindayo ...
Multifunction egumbini lokulala Hardware ingubo yokugqwala ...
Umklamo wanamuhla oyingqayizivele yethusi omkhulu onamandla we-...
URuian Zhangshi Hardware Co, Ltd. wasungulwa ngonyaka ka-2013, utholakala eWenzhou, esifundazweni se-zhejiang, eduze nase-Ningbo & Shanghai Port. Sakhethe ngokukhethekile ukukhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zokuwohloka kwasendlini, ifenisha, izesekeli zekhishi lekhishini lamashumishumi eminyaka, kufaka phakathi izimbambo, ukuvala umnyango, isibambo sethusi ngaphezulu kwalokho okungu-1 million pcs wokuphuma konyaka. Sinezinombolo zabasebenzi bezobuchwepheshe ezivelele nomphathi, nabantu abangaphezulu kuka-5. Ngakho-ke singumnikazi womklamo womkhiqizo okhethekile, sithuthukise izitayela ezintsha ezihlukile nezinhle zokuhlangabezana nomuzwa wokukhululeka wesandla somsebenzisi. Siwina ukwazisa okuvela kumakhasimende kusuka ezifuywayo nasezandleni.
Semukela imishini yokuqonda enobuhlakani yesimanjemanje, umugqa wokukhiqiza ozenzakalelayo, uphishekela ukugqama kwekhwalithi yomkhiqizo nenqubo yokufaka amapayipi, qhubeka nokwenza ngcono inqubo yokulawula ukukhiqiza, inqubo yokukhiqiza futhi ihlangabezane nezidingo zobuchwepheshe ezivela kumakhasimende omhlaba. Sinethuba ekukhuleni isikhunta, imishini ye-CNC, yokwenza inhlanganisela, ngoba intengo yethu iphansi ngo-3% - 5% kunezinye izimbangi.
Sigcina ukuxhumana okuphezulu nekhasimende, njalo sithatha izidingo nezeluleko zamakhasimende ukuze sithuthukise izinga lekhwalithi yensizakalo, sifinyelele ama-oda ngekhwalithi ephezulu nenani. Sithole isitifiketi sokuhlaziywa kokukhiqizwa kweBV, sizokwandisa imakethe yaphesheya futhi siqhubeke nokubambisana kwamazwe eminyakeni embalwa ezayo. Isisekelo senani lenkampani yethu "Ubuqotho kuqala, ikhwalithi yokuqala, ikhasimende kuqala, ukubambisana kokuwina", ngakho-ke singakwazi ukuqhubeka nenqubekela phambili engaguquki. Isithembiso sethu kwikhasimende lethu siyinsiza enhle, intengo yokuncintisana, sigcwalisa i-oda ngekhwalithi ephezulu.
Brass Door Knobs, Amabhloksi omhluzi we-Brass Door, Solid Brass Door Knobs, Izibambo ze-Brass Lever Door, Ifenisha Hardware Izibambo, Izibambo zefenisha kanye nezimpunzi,